आगामी दिनमा मतदाताले घरमै बसेर मत हाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छः कमिस्नर लिम्बु - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
आगामी दिनमा मतदाताले घरमै बसेर मत हाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छः कमिस्नर लिम्बु
प्रकाशित मिति: २० असार २०७२, आईतवार July 6, 2015
एनआरएन अष्ट्रेलियाको निर्वाचन सकिएको छ । मतगणना शनिबार राती सकिएर परिणाम बाहिर आइसकेको भएपनि त्यसको औपचारिक घोषणा आइतबार मात्रै गरिएको हो ।यसै सन्दर्भमा नेशनल इलेक्सन कमिस्नर जोग लिम्बुसँग असनेपालन्यूजले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
मतदान प्रक्रिया कस्तो रह्यो, तपाईंको अनुभुति के छ?
निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । मतदान सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो । म निर्वाचन समितिको तर्फबाट यो निर्वाचनमा भाग लिन आउनु भएका सम्पूण मतदाताहरू, नेशनल र स्टेट कमिस्नरहरू, आइसीसीका पदाधिकारीहरू, एनसीसी र एससीसीका पदाधिकारीहरू एवम् सदस्यहरू, कम्युनिटी लिडर र स्वयम सेवक तथा पत्रकार साथीहरूलाई निर्वाचन प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न लाग्नु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने गुनासो आयो । मतदान पक्रिया किन झन्झटीलो बन्यो?
पहिलो पटक विद्युतीय मतदान प्रक्रिया अपनाएको कारणले केही कठिनाईहरू देखिनु स्वभाविकै हो । यसमा हामी पनि अभ्यस्त भइसकेका थिएनौँ । छोटो समयमा तयारी गरिएकाले पर्याप्त मतदाता शिक्षा पनि दिन सकिएन । त्यसकारण मतदाताहरूमा अन्यौलता देखियो । त्यसैले केही समस्या भएको हुन सक्छ । तर, बाहिर आएजस्तो झन्झटीलो भने होइन । हामीले प्रशस्त मात्रामा कम्प्यूटरको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ । तथापी सर्भरमा बीचमा समस्या देखियो । त्यो पनि छिट्टै सल्भ गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ ।
निर्वाचन व्यवस्थित गराउन अर्को पटकलाई केही सुझाव छ कि ?
हामी परिस्कृत हुने क्रममै छौँ । व्यक्तिगत हिसावले म के सुझाव दिन चाहन्छु भने अर्को पटकको निर्वाचनमा मतदाले घरमै बसेर मत हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । मतदान स्थलसम्म मतदाता आउँदा केही विलम्ब हुन्छ । अरू व्यवस्थापकीय खर्च बढ्छ । त्यसकारण घरबाटै मत हाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइयो भने खर्च र समय दुवैको बचत हुन्छ । भद्रगोल पनि देखिँदैन ।
विद्युतीय मतदानमा पनि निर्वाचन परिणाम आउन किन ४८ घण्टा लाग्यो?
तयारी अत्यन्त कम समयमा भयो । मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु कि यो पहिलो पटक प्रयोग भएको हो । पहिलो पटक प्रयोग हुँदा केही प्राविधिक कठिनाई आउँछ । मतदान सकिएपछि केही औपचारिक प्रक्रिया हुन्छन् । मतगणना भइसके पछि रूजु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण ढिला भएको हो । तथापी हामीले व्यवस्थित ढंगबाट निर्वाचन गर्न सफल भएका छौँ ।
निर्वाचनमा गुटगत प्रचार र पर्चा बाँड्न नपाईने भनिएको थियो, किन रोकिएन?
हामीले गुटगत प्रचार र पर्चा बाँड्न रोक्ने प्रयास नगरेको होइन । त्यसो नगर्न चेतावनी सहित उम्मेदवारहरूलाई इमेल पठायौँ । कतिपय उम्मेदवारहरूलाई फोन समेत गर्यौँ । निर्वाचनै हुने भएपछि जति गरेपनि त्यो रोकिँदो रहेनछ । तथापी यो अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा निकै कम हो । हामीले बेलैमा सचेत गराउने र आचार संहितामा अझ कडाइ गर्ने हो भने यो अगामि वर्षहरूमा विस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
अर्को, केन्द्रमै पनि यो समस्या छ । काठमाडौँमा केन्द्रको अक्टोवर नोभेम्वरमा निर्वाचन हुँदैछ त्यो बेलामानै कडाइका साथ नियन्त्रण प्रयास गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन स्वस्थ भएन भन्ने गुनासो छ नि?
निर्वाचन निष्पक्ष भएको छ । कुनै धाँधली भएको छैन । असन्तुष्टि सुनिएको छ । सवैलाई चित्त बुझाउन नसकिँदो रहेछ ।
अहिले प्रयोग भएको आइडी र पासवर्डको सुरक्षामा के विचार पुर्याउनु भएको छ ?
हामीले यो निर्वाचनमा प्रयोग भएका आइडीहरूको गोपनियताको बारे कुरा उठाएका छौँ । यसको सुरक्षाको विषयमा सफ्टवेयर निर्मातसँग पनि कुरा गरेका छौँ । प्राइवेसी एक्ट के छ त्यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यसको सुरक्षामा विशेष ख्याल राख्छौँ ।
मतदाता सूचीमा पनि अन्यौलता देखियो । कतिपयको नाम समेत भेटिएन । यस्तो समस्या किन आयो?
मतदाताहरूको नाम कम्यूटरमा अध्यावधिक गर्ने काम भएको थियो । तथापी केही प्राविधिक समस्या देखिए होला । आगामि दिनमा त्यो निराकरण हुनेछ ।
अन्यत्र निर्वाचन व्यवस्थित भयो, सिड्नीमा चाहिँ किन हुन सकेन?
तपाईंलाई थाहै छ, सिड्नीमा मतदाताहरूको संख्या अन्यत्र भन्दा बढी थियो । त्यसकारण यहाँको निर्वाचन सवैको चासोको विषय बन्यो । मतदाता बढी भएपछि केही ढिलाई केही समस्या उत्पन्न हुनु नौलो होइन ।
एनआरएनए अष्ट्रेलियाले मलाई जुन जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो त्यो पुरा गरेँ । यसक्रममा सहयोग गर्ने सवैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । अर्को मैले यो निर्वाचनसँगै एनआरएनको भूमिका बढेको महसुस गरेको छु । नेपालको भूकम्प पछि राहत र पुनःस्थापनामा एनआरएनए अष्ट्रेलियाले खेलेको भूमिकासँगै हामीले अर्को महत्वपूर्ण काम फत्ते गरेका छौँ । यसले हामीलाई आगामी दिनमा ठूल्ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न पनि सघाउ पुर्याउँछ ।